ကတည်းက 2001, Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., LTD သည် Zhuzhou City တွင်တည်ရှိသည်, ဟူနန်ပြည်နယ်, တရုတ်ပြည်၏အကြီးဆုံး tungsten carbide ထုတ်လုပ်တဲ့isရိယာဖြစ်ပါတယ်. ပြီးနောက် 20 နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်, ကျနော်တို့ထိပ်တန်းဖြစ်လာခဲ့သည် 10 Zhuzhou ၌တည်၏.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များတွင်အဖြိုက်နက်ကာဗိုက်ချောင်းများပါ ၀ င်သည်, carbide strips တွေ, carbide ခလုတ်များ, carbide လိပ်, carbide disc ကိုကိုခုတ်, carbide ကြေးဝါအကြံပေးချက်များ, carbide အဆုံးစက်များ, carbide ပုံဆွဲအနိစ္စရောက်လေ၏, carbide ခေါင်းစဉ်သေ.
Carbide ကျောက်မီးသွေး Cutter ခလုတ်
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖြန့်ဖြူးသော ၀ န်ဆောင်မှုစနစ်ပြည့်စုံပါသည်. ကွဲပြားခြားနားသောအရေအတွက်နှင့်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်သည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောရေကြောင်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရန်ဖောက်သည်အားအကြံပေးလိမ့်မည်. ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင့်ထုတ်ကုန်များကိုသင့်တော်သောအချိန်နှင့်နေရာမှန်တွင်ရရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သေချာပါသည်.
UBT carbide ၌သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးရှိသည်, သင်ရွေးချယ်နိုင်သောပစ္စည်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြံဥာဏ်ကိုရနိုင်သည်, ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ဇယား. ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထံမှရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်ငြိမ်။ ရေရှည်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်. တ ဦး တည်းကြိုးစားမှုထာဖြစ်ပါတယ်.